Dhageyso:- Muungaab Oo Ka Digay Fikirka shiicada. – SBC
Dhageyso:- Muungaab Oo Ka Digay Fikirka shiicada.
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho Xasan Maxamed Xuseen (Muungaab) ayaa sheegay in aysan aqbali doonin in magaalada Muqdisho lagu beero fikir Shiico ah.
Guddoomiye Muungaab ayaa sheegay inay cabasho ka soo gaartay Culumaa’udiinka Soomaaliyeed Iyo Dhamaan Dadka Reer Muqdisho oo ku saabsan NGO ku shaqeysanaya in magaalada Muqdisho ku beeraan fikirka Shiicada ah sida uu Hadalka Udhigay.
“Dhamaan Umadda Soomaliyeed Waa Sunni, mana aqbleyno in Shiica timaado wadankeena, dhamaan hey’adaha Ammaanka Gobolka iyo Gudoomiyaasha degmooyinka, Dhalinyarada Iyo haweenka waxaa la farayaa inay ka Hortagaan soona qabtaan NGO -gii la gu arko, isagoo faafinaya fikirka shiicada”ayuu yiri Guddoomiye Muungaab.
Muungaab Ayaa sidoo Kale Sheegay in Magaaladda Muqdisho Uu Isaga Xukumo una Dulqaadan Doonin Fikirkaasi,
“Xamar Aniga ayaa xukuma Shiicana ma aqbaleyno, waxaana dhib nagu haya Argagixiso Shiicana ma rabno”ayuu yiri Gudoomiyaha G/banaadir Xasan maxamed Muungaab.
Muungaab ayaa hadalkan sheegay xilli uu shalay kormeerayay degmada Yaaqshiid, halkaasoo ay ka socotay olole looga cirib tirayay geedka loo yaqaano Cali garoobka ama Geed Yuhuudka, kaasoo dhibaato ba’an ku haya nolosha iyo bilicda caasimada.